UKUBI -Umthengisi wamazwe aphesheya wezixhobo zamandla kunye neebhetri ezisetyenzisiweyo ngephulo elinemixholo yeholide apho oopopayi abavulekileyo bezisondeza kumfumba weephakeji zabo kumxholo wombala kunye nezixhobo zamandla. Ngokucofa i-CTA ekhokelele abathengi kumava anokutshintsheka, kunye nezibane zeholide ezixhonywe ngentla, apho ungathenga khona ngeendlela ezintathu ezahlukeneyo. Ukuzibandakanya ngakumbi kukhokelele ababukeli kwiphepha leenkcukacha zemveliso kunye nendawo ekugcinwa kuyo ivenkile ukufumana oyena mthengisi ukufutshane uthengisa iimveliso zabo. Eli phulo lenze umsebenzi omkhulu wokudibanisa oopopayi abatyebileyo kwimithombo yeendaba kunye nokunxibelelana ukwenza iyunithi ebandakanyekayo eqhuba imveliso / yokujongana nokwazisa, kunye nesixhobo esihle sokufumana umthengisi osondeleyo.
tags: amaqashiso amakhuluiindlela zomthengiumnxeba kwisenzogamificationUkuhlawulelwa kwekhadi lesiphoInkcitho yekhadi lesiphoAmakhadi wesiphoIindlela zokuthenga ngeholideukungasebenzijosh kwiziseleintengiso yeselulaOOHngaphandle kwekhayakwintengiso yasekhayaubaintengiso yesintu